अन्तराष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त पुनम श्रेष्ठ::KhojOnline.com
ललितपुर :- बिगत लामो समय देखि सौन्दर्य क्षेत्रमा रहेकी ब्युटी एक्सपर्ट पुनम श्रेष्ठ पाल्पा तानसेन देखी आफ्नो करियर सुरु गरेकी हुन् । घरपरिवारको भरपुर साथ पएकी सफलताको प्रमुख कारण परिवारनै मान्छिन् । उनको प्रेरणाको स्रोत भनेको जेठि दिदि जिवा लक्ष्मि श्रेष्ठ हुन् । उनको मेहनत र लगनसिलताले छिटै सफलता हात पारिन् । पाल्पामा राम्रो सफलता पाएकी पुनमलाई अझ धेरै गर्न सक्छौ भन्ने सरसल्लाह साथिभाईले दिन थाले पछिको उनको यात्र काठमाण्डौ्ँमा सुरु गर्ने सोचिन । २०७४ सालमा उनले ललितपुर सानेपामा भव्य र सभ्यताका साथ पुनम ब्युटि क्लब नामकको ब्युटिपार्लर सञ्चालन गरिन । उक्त पार्लरको ओपनिङ् भने चर्चित गायिका एवम सञ्चार कर्मि कोमल ओलिको हात बाट भएको थियो । सधै काममा उत्साही रहने ठाउँ नयाँ भए पनि कहिले निरास हुन परेन 1. सुरुबाटनै उनको कामकको चर्चा हुन थाल्यो । पार्लर ओपनिङ गरेको पहिलो महिनानै नेपालको चर्चित म्यगजिन नवनारी मासिक बाट नायिका रिचा शर्माको लागी कभर पेज मेकअपको अफर आएको थियो । त्यस पछि उनको कामको लगातार चर्चा हुन थाल्य पछि भने लगातार विभिन्न म्यगजिनहरुले फलो गर्न थाले ।
उनको कामको चर्चा धेरै गरेता पनी उनमा अफुलाई अझ अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने सधै नै लागिरहने उनी सि.टि.भि.टि. को एसोसर समेत रहेकी अन्तराष्ट्रिय लेबलको कोर्षहरु गरी बेलायती सटिफिकेट भि.टि.सि.टि लेबल तिनबाट मेकअप कोर्ष मान्यता प्राप्त नेपालकै पहिलो मेकअप आर्टिस्टको नाममा परिचित छिन् । साथै भरखरै मात्र रसियन हेयर स्टाईलको मास्टर्ष लेबलको कोर्ष गर्नुका साथै विभिन्न ठाउँबाट आएका चालिस विधार्थिहरु बिच भएको प्रतिसपर्दा उनी उत्कृष्ट तिनमा पर्न सफल भई गोल्डमेडल समेत हात पार्न सफल भएकी थिईन । अन्तराष्ट्रिय लेबलको सटिफिकेट भई अन्तराष्ट्रिय लेबलको तालिम दिने पहिलो ब्युटि एक्सपर्टको रुपमा ख्यतिप्राप्त छिन् अहिले भने विभिन्न ठाउँमा तालिम दिने क्रममा हाल चितवनमा व्यस्त छिन् ।